Mamorona sary mahomby amin'ny alàlan'ny fitsipika fototra 4 | Famoronana an-tserasera
Ho afaka hanao sasany singa dokam-barotra marina, zava-dehibe ny manome ny saina ilaina ho an'ireo singa mandrafitra azy, ny fitambaran'ireo rehetra ireo miaraka amin'ny fahaizan'ny mpamorona miandraikitra azy, hahafahantsika manana fitaovana amidy.
Manaraka izany dia holazainay aminao ny sasany amin'ireo singa izay hamaritana ny fahombiazana mety hananan'izay te hanana izany mpamokatra sary.
1 Toetra mampiavaka ny mpamokatra sary
1.1 Ny firafitra
1.2 Ny fanohanana sy ny fahavitany
1.3 Votoatin'ny literatiora
1.4 Ireo sary
2 Azontsika atao ny mamaritra fa tsy maintsy manaraka ireto torohevitra manaraka ireto izahay:
Toetra mampiavaka ny mpamokatra sary
Alohan'ny hanombohana ny famolavolana endrika dia zava-dehibe izany manaova rafitra lojika, izay mila manatsara mazava sy mora vakiana izany dia hanana ny fampahalalana kasainao hapetraka ao anaty endrika. Saingy miankina amin'ny atiny ihany koa ny fikambananany, amin'ny fanohanana izay ahitantsika ny tenantsika.
Ny fanohanana sy ny fahavitany
Araka ny tokony ho fantatsika, alohan'ny handefasana hafatra momba ny dokam-barotra dia tsy maintsy farito mazava tsara ny media na ny mpanohana izay hahombiazantsika rehefa mandefa azy ireo.
Amin'izao fotoana izao manomboka miseho ny fisalasalana sy ny fanontaniana Ho ivelan'ny serasera ve ny vokatray sa amin'ny Internet? Hatao amin'ny taratasy ve ny fanontana ataontsika na amin'ny fanohanana maharitra? Hanao maty ve ny tetikasanay vita pirinty sa hametraka verinia ao aminy? Miankina amin'ny tanjona, ny atiny tadiavina, ny mpihaino lehibe ary zavatra maro hafa, dia hofidintsika ny fanohanana izay mamaritra ny fahombiazan'ny entanay amin'ny varotra.
Betsaka ny fanohanana sy ny famaranana ary misy singa maro hiankina amin'ny safidintsika.
Ny kopia vita tsara dia tena zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny hafatra rehetra Tianay hapetraka, na dia tena manandanja tokoa aza ity hafatra ity sy ny lohatenin'ny vokatra doka sasany, amin'ny ankapobeny, ho an'ny singa famolavolana rehetra lahatsoratra samy hafa ka tsy marina fotsiny izy ireo amin'ny teboka tsipelina, fa mba haharesy lahatra azy ireo ihany koa ary mety amin'ny mpihaino antsika, izany hoe mila manazava sy mahatakatra izy ireo.
Raha tsy manana traikefa hahafahantsika manorata lahatsoratra voalamina tsara, mila mitady ny fanampian'ny a mpanoratra an-tsoratra matihanina hanampy antsika amin'ny làlana tsara. Tokony ho fantatsika fa ny ankamaroan'ny masoivoho matihanina dia manana endrika dika mitovy amin'ny ekipan'izy ireo ihany koa.
Tsy azo lavina ny tanjaka sy ny fiantraikan'ny sary tsara, dia toy izany koa zava-dehibe hanohanana ireo hafatra an-tsoratra Miaraka amin'ny sary matanjaka sy mety dia tsy maintsy manana kalitao tena tsara izy, tsy ho an'ny atiny sary ihany fa ho an'ny habeny ihany koa. Raha mamela azy ny teti-bola, dia mahomby mampiasa sary mety Raha matihanina izy ireo dia hanome ny doka miaraka amin'ny toetra sy ny realisme.
Raha ny Famokarana sary tsy azo atao izany, misy maro banky sary tsy misy mpanjaka, izay ahafahantsika mahita safidy isan-karazany amin'ny vidiny mora, saingy mila mitandrina kosa isika amin'izany safidy izany, satria raha manararaotra antso isika sary mahazatra, afaka mamolavola endrika tsy izy manokana sy mahafinaritra isika.
Ho an'ireo fotoana ireo dia zava-dehibe izany mifidy mpamorona hanatanteraka ity tetikasa ity.
Amin'ny maha tendron'ny matihanina anao dia mamporisika anao izahay hiala amin'ny tongotra ankavanana ary hiara-hiasa amin'ny atiny, firafitra ary misy atiny literatiora tsara Ary raha tsy mahafinaritra anao ny manao izany, dia azonao atao ny mangataka fanampiana amin'ny manam-pahaizana manokana izay afaka manome tanana anao amin'ireto tranga ireto.
Azontsika atao ny mamaritra fa tsy maintsy manaraka ireto torohevitra manaraka ireto izahay:
Tsy maintsy mamolavola rafitra lojika isika alohan'ny hanombohantsika manao karazana endrika.
Ny fahombiazan'ny entana amidy dia tsy maintsy faritan'ny mifantina mpanelanelana.
Antsoina hoe andiana lahatsoratra mamorona sanganasa famoronana dika mitovy ary zava-dehibe amin'ny atiny haisoratra.
Azo inoana kokoa izany misarika ny sain'ny besinimaro Ary vakio ny atiny rehetra raha mametraka sary misy fiatraikany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Mamorona tabilao mahomby amin'ny alàlan'ny fitsipika fototra 4
Fironana hita maso: ny hafatra alohan'ny hatsaran-tarehy